R/wasaaraha Itoobiya oo qiray in dagaalka Tigray ay ka qayb qaateen ciidamo Eritrean ah – Calanka.com
R/wasaaraha Itoobiya oo qiray in dagaalka Tigray ay ka qayb qaateen ciidamo Eritrean ah
Ra’iisel wasaaraha Itoobiya ayaa qirey markii ugu horeysay in ciidamo ka socda dalka ay deriska yihiin ee Eritrea ay ku sugan yihiin gobolka Tigreega ka dib dagaalkii bishii November.Muddo bilo ah ayay labada dalba beeniyeen in ciidammadaasi ay ka gudbeen xadka.
Abiy Ahmed ayaa u sheegay mudanayaasha baarlamaanka in ciidamada Eriteriya ay yimaaddeen iyagoo ka baqaya in ay weeraro uga yomaaddaan dagaalyahanada gobolka ee Tigray.Iska hor imaadkan ayaa bilawday kadib markii Jabhada Xoreynta Dadka Tigreega (TPLF) ay qabsatay xarumo ciidan oo kuyaala gobolka.
Kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku eedeynaya askarta Eriteriya inay xasuuq ka geysteen magaalooyin sida Aksum, oo ay ka mid yihiin dilka dadka rayidka ah ee aan hubeysneyn, kufsiga haweenka iyo dhaca baahsan ee hantida dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Ra’iisul wasaaraha ayaa u sheegay baarlamaanka in Ereteriya ay sheegtay in askarteeda ay u dhaqmayaan sugida xuduuda, iyagoo la wareegaya dhufeysyo halkaas ku yaal oo ay ka tageen askarta Itoobiya ee u baxay dagaalka.Wuxuu sheegay inuu kala hadlay saraakiisha Eriteriya eedeymaha loo soo jeedinayo ee ah in askarta ka socota Eriteriya ay xasuuq ka geysteen Tigray.
“Kadib markii ciidanka Eriteriya ay ka gudbeen xadka isla markaana ay ka howlgaleen dalka Itoobiya, wixii dhibaato ah ee ay u geystaan dadkeena lama aqbali karo,” wakaalada wararka ee AFP ayaa soo xigatay isaga oo leh.
Bartiisa Twitter-ka ayaa intaas ku dartay: “Warbixinadu waxay tilmaamayaan in tacadiyo laga gaystay gobolka Tigray.”Iyadoo aan loo eegin dacaayadaha buunbuuninta ah ee TPLF, askari walba oo mas’uul ka ah kufsiga haweenkeena iyo dhaca bulshada kudhaqan gobolka waa lala xisaabtami doonaa maadaama hadafkoodu yahay ilaalinta.”